ခင်ဦးသာ| November 23, 2012 | Hits:633
14 | | ဇွန် ၈ ရက် မောင်တောတွင် ဆူပူသူများနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – မှူးဇော်၏ Facebook)
14 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website david November 23, 2012 - 3:58 pm	မောင်းတောမှာပြသာနာ မဖြစ်အောင် သူတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ် ၀တ်ပြုပြီးထွက်လာတဲ့သူတွေကို
Reply	ဖိုးလုံး November 23, 2012 - 5:14 pm	မြန်မာစစ်သားတွေအဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စမှာ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အားပေးမှု၊ပါဝင်ပတ်သတ်မှုတွေ ရှိနိုင်ချေ အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဟာ အိမ်နီးချင်းကောင်းမပီသတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ဆက်ဆံရေးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ဆက်ဆံလို့မြန်မာပြည်အတွက် ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးတွေပဲရဖို့ရှိပါတယ်။ နယ်စပ်ကိုလုံနေအောင်ကာပြီး ကူးလာတဲ့သူမှန်သမျှကိုပစ်မိန့်ထုတ်ထားသင့်ပါတယ်။ လာဘ်စားပြီးခိုးသွင်းပေးတဲ့မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေကိုလည်းထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင့်ပါပြီ။ ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှာရှိတဲ့ ရခိုင်တွေကိုပြန်ခေါ်၊ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ တရားဝင်နိုင်ငံသားကတ်မကိုင်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကိုဘယ်ရောက်ရောက်၊ဘယ်ပေါက်ပေါက်မောင်းထုတ်သင့်ပါတယ်။
Reply	Kaung November 23, 2012 - 11:36 pm	Right.
Reply	Hla Maung November 24, 2012 - 12:41 am	very good.
Reply	Hla Maung November 24, 2012 - 12:42 am	To Pho Lone – You are right. I support you 100 %.
Reply	tinzawhtoo November 26, 2012 - 9:25 pm	right
Reply	၀ဏ္ဍ November 23, 2012 - 7:11 pm	လုံထိန်းတွေက အကြောင်းမရှိပဲ ဘာမှ စပြီး ပစ်ခတ်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။
Reply	swe htwe November 23, 2012 - 8:09 pm	No one is above the law.
Reply	ဘကျော်ထူး November 24, 2012 - 2:22 am	အော် နားသွားရရှာပြီကိုး။
Reply	ခိုင်စိုးမိုး (ကျောက်တော်) November 24, 2012 - 10:54 am	မိုးရွာရေ၊ ကိုယ်နာရေ
Reply	ခိုင်စိုးမိုး (ကျောက်တော်) November 24, 2012 - 10:54 am	ရခိုင်လူမျိုးများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် အပိုင်း(၂)ပိုင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုသည်-
– ပြည်ပနှင့် ပြည်မရောက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၊ ရခိုင်ပြည်သို့ ပြန်လည်အခြေချပေးရန်။
– ရခိုင်လူဦးရေ နည်းပါးနေသော ဘူးသီးတောင်နှင့်မောင်တောမြို့များသို့
– ရခိုင်လူဦးရေတိုးပွားရေးအတွက် မိသားစုတစ်စုလျှင် အနည်းဆုံးကလေး၅ဦးမွေးဖွားရန်။
– ရခိုင်လူမျိုးများ ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊ဘာသာရေး၊လူမှုရေး တိုးတက်ရန်အတွက် အများပိုင်
– ရခိုင်ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရခိုင်လူမျိုးများ လက်ဝယ်တွင် ပြန်လည်
– ရခိုင်စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ၊ အမျိုးသားရေး စရိုက်လက္ခဏာများ
– ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောတွင် သာသနိက အဆောက်အအုံများ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်
– ရခိုင်လူငယ်များ ခေတ်မီအတက်ပညာများ သင်ယူဆည်းပူးနိုင်ရေး၊ ပညာရေး
– အဖ ရခိုင်ပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရခိုင်သားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိသည်။
Reply	ခိုင်စိုးမိုး (ကျောက်တော်) November 24, 2012 - 10:55 am	ရခိုင် လူမျိုးများအတွက် တို့တာဝန်အရေးသုံးပါး
– ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိရေး – ဒို့အရေး (ငါရို့အရေး)
– ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ လုံခြုံမှုရှိရေး – ဒို့အရေး (ငါရို့အရေး)
– အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး – ဒို့အရေး (ငါရို့အရေး)
Reply	မင်းကြီးညို November 24, 2012 - 10:38 pm	ဖိုးလုံးရဲ့ကွန်မင့်ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရနဲ့သံတမန်အဆက်အသွယ်ဖြတ်
Reply	burmathwe November 27, 2012 - 10:38 pm	မနပ်တဲ့ သူက ထောင်၁၂ နှစ်ကျသွားတယ်၊နပ်တဲ့ သူက ****** ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ rolex နာရီတွေ အတုသွင်းတဲ့ **** နာရီဆိုင်က ဘဲလေ၊ဒီလောက်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ ထားတာ ဆွစ်ဇာလန် ကနာရီ ဘယ်လိုသွင်းလို့ ရမှာလဲ..ခေါင်းမရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်း rolex နာညီ အတုတွေ ပတ်ပြီး လူကြားထဲမှာ တကြွားကြွားနဲ့ …